सावधान! ब्ल्याक फङ्गसबाट सं’क्रमित मध्ये ५० प्रतिशतको ज्यानै जान सक्छ !
Homeसमाचारसावधान! ब्ल्याक फङ्गसबाट सं’क्रमित मध्ये ५० प्रतिशतको ज्यानै जान सक्छ !
June 1, 2021 admin समाचार 3393
भारतसँगै नेपालमा पनि म्युको’रमाइकोसिस अर्थात् ब्ल्याक फङ्गस (कालो ढुसी)का बिरामी दे’खिन थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्राल’यका अनुसार नेपालमा १० भन्दा बढीमा ब्ल्याक फङ्गस अर्थात् कालो ढुसी देखिएको हो । भारतका कतिपय राज्यमा ब्ल्याक फङ्गसलाई महामारीको रुपमा घो’षणा गरिसकेको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्र’मितमा क्रमशः ब्ल्याक फङ्गस देखिन थालेको आईओएमका सहप्रा’ध्यापक तथा छाती रोग विशेषज्ञ डा. निरज बम बताउँछन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कालो ढुसी सक्रमण भएका ४० वर्षका एक पुरुषको शल्य’क्रिया गरिएको डा.बमले बताए । कालो ढुसी देखि’एका ति व्यक्तिको आँखा र नाकको शल्यक्रिया गरिएको हो । शल्यक्रिया गरिएका ती बिरामीलाई एम्फोटेरिसिन बी औषधिको प्रयोगबाट उपचार गरिरहेको डा.बमले जान’कारी दिए ।
‘फङ्गस अर्थात (कालो ढुसी) अर्का एक जनाको शल्य’क्रियाको तयारी भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोरोना मुक्त भएर अस्पतालबाट फर्किसकेपछि ललितपुरका एक जनामा कालो ढुसी देखिएको उपचा’रको लागि टिचिङ अस्पताल आउनु’भएको छ ।’
यस्तै वीर अस्प’तालपनि ३१ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमणपछि कालो ढुसीको समस्या देखिएपछि सोमबार शल्य’क्रिया गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । ती ३१ वर्षीय पुरुषको नाक तथा आँखामा फै’लिसकेको फङ्गस शल्यक्रिया गरेर निकालिएको अस्पतालले जनाएको छ । सर्जरी पछि कोभिड आईसीयूमा उपचार भइरहेको अस्प’ताल पूर्व निमित्त निर्देशक डा.शान्ता सापकोटाले बताइन् । नेपालमा पनि कोरो’नामुक्त भइसकेपछि म्युकोरमाइकोसिसको स’मस्या देखिएको डा. बम बताउँछन् ।
कस्ता व्यक्ति’लाई ब्ल्याक फङ्गस लाग्छ ?
म्यूकोर्माइकोसीस (Mucormycosis) नामक फंगाइ’का कारण हुन्छ । दीर्घरोगी तथा पुनः बिरामी भएका, शरीरको प्रतिरोधी प्रणा’लीलाई कमजोर बनाउने औषधीहरु सेवन गरिर’हेका, प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिलाई म्यूकोर्माइकोसीस तथा कालो ढुसी संक्र’मण हुने डा. बम बताउँछन् ।
कालो ढुसी शरीरको कुनै पनि हिस्सा’मा लाग्न सक्छ । कोरोना संक्र’मितहरुले स्टेरोइड र टोसिलिजुमाव इन्जेक्सनको अत्याधिक मात्रा प्रयोग गर्दा रोग प्रतिरो’धात्मक क्षमता घट्ने भएकाले संक्रमि’तमा कालो ढुसीपनि देखिएको उनले बताए । कोरोना संक्र’मित त्यसमाथि मधुमेह भएका व्यक्तिलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘संक्रमि’तमा सुगरको लेभल बढ्दा शरीर कमजोर हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अस्पतालमा मधुमेह भएका व्यक्ति, संक्र’मित भएर होम आइसोलेशनमा बसेका थप सम’स्या आउनसक्छ, त्यसैले कालो ढुसीबाट जोगाउनका लागि दीर्घरोगी तथा मधुमेहका बिरामीलाई नि’गरानीमा राख्नुपर्छ ।’
कोभिड बिरामीसँगै दी’र्घरोगी जस्तै क्यान्सर, मृगौला, मुटु, अंग प्रत्यारोपण गर्ने, क्यान्सरको उपचार गराइरहे’काहरुमा फङ्गस अर्थात (कालो ढुसी) उच्च जोखिम रहेको डा. बम बताउँछन् । यो रोग कुनै पनि उमेर समूहका व्यक्तिका लागि जो’खिम रहेको उनले सुनाए ।
क’सरी सर्छ कालो ढुसी
शरीरमा कालो ढुसीको संक्र’मण भएपछि पहिचान गर्न नसकेको खण्डमा ५० प्रतिशतको ज्यान जाने ख’तरा उच्च रहेको अध्ययनले देखाएको डा. बमको भनाइ छ । वाताव’रणमा फङ्गस अर्थात (कालो ढुसी जहाँ सुकै हुन सक्छ । जस्तै जमिन र सढे’का कुनै वस्तुमा, पात–पतिङ्गर, कुहिएका सडे’का दाउरा, कम्पोस्ट खादमा हुन सक्छ । हावाको माध्यमबाट ब्ल्याक फङ्गस सर्छ । श्वासको माध्य’मबाट वातावरणमा रहेको ब्ल्याक फङ्गस शरीरमा पुग्छ ।
स्वास्थ्यमा गम्भी’र असर
फोक्सोमा पनि ब्ल्याक फङ्गसले श्वासप्रश्वासको माध्य’मबाट क्षति पु¥याउन सक्छ । शरीरमा कुनै घाउ वा जलेको भए त्यहाँबाट संक्र’मण शरीरका विभिन्न भागमा स’क्रमण फैलन सक्छ । कालो ढुसी शरीरको जुन क्षेत्रमा पनि लाग्न सक्छ । जहाँ कालो ढुसी लाग्छ त्यहाँको भाग काम नलाग्ने बनाउन सक्छ । जस्तै अहिलेसम्म नाम, मुख, आँखाको वरि’परिको भागमा कालो ढुसी लागेको देखिएको छ । भारतमा कालो ढुसी आँखा वरिपरि लाग्दा आँखा नै निका’ल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीले सुनाए । आँखाको ज्योति समेत गुम्नसक्छ । यो टाउकोमा भयो भने ब्रेन ट्युमर लगा’यतका रोग लाग्छ । समयमै उपचार भएन भने दिमागसम्म पुगेको कालो ढुसीले मृ’त्युको संख्या उच्च रहेको उनी बताउँछन् ।
यो शरीरमा संक्र’मण हुँदा कस्तो लक्षण देखिन्छ
ब्ल्याक फङ्गस शरीरको जुन हिस्सामा सं’क्रमण हुन सक्छ । संक्रमणको आधारमा ल’क्षण देखिने गर्छ । जस्तै ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, नाक बन्द हुने, बान्ता तथा उल्टी आउने, छाती दुख्ने, अनुहारको एकपट्टिको भाग फुलिने, नाकमा कालो’कालो घाउ देखिने हुन्छ । सामान्यतया कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएको २ देखि ४ हप्तासम्म कालो ढुसीको समस्या देखिन्छ । कोलो ढुसीको सं’क्रमण भएको १० देखि ६० दिनसम्म पनि समस्या देखिरहन सक्ने वरिष्ठ रोग विषेशज्ञ डा. बम बताउँछन् ।
ब्ल्याक फङ्ग’सबाट यसरी बच्ने
कोरोना सं’क्रमण भएका व्यक्तिलाई ब्ल्याक फङ्गस संक्र’मण भएको छ । कोरोना मुक्त भएपनि स्वास्थ चेकजाँच गराइरहन डा. बमको आग्रह छ । ब्ल्याक फङ्गसको ल’क्षण देखिएमा त’त्काल अस्पताल पुग्ने तथा चिकित्स’कसँग सल्लाह लिनुपर्छ । ब्ल्याक फङ्गस भएको सुरुवाती अवस्थामै थाहा पाएको खण्डमा उपचार स’म्भव हुने उनको भनाइ छ ।
“व्ल्याक प्यान्थर” बाट च’र्चित अभिनेता बोसम्यानको ४३ बर्षमै नि’धन
नेता उज्वल थापाको निधन, परिवारले दियो शुभचिन्तकलाई यस्तो संदेश
January 26, 2021 admin समाचार 5540
आयुर्वेदमा अमलाको निकै मह’त्व छ । नियमित रुपमा अमलाको सेवन गर्दा निकै ग’म्भीर रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ । अमला भिटामिन सी र एन्टिअक्सिडेन्ट गुण भरि’पूर्ण हुन्छ । यतिमात्रै होइन, अमलामा क्याल्सियम, पोटासियम, क्यारोटिन, आइरन, फाइबर,
ओली प्रचण्ड र देउवालाई चे’तावनि, ख’बरदार त्यो रेशम चौधरीलाई छुटाउने होइन (भिडियो सहित)
March 16, 2021 admin समाचार 4557
आखिर को हुन् रे’शम चौधरी ? किन जसपाले उनको रिहा,इलाई मुख्य शर्त बनायो ? उनको रि,हाइ सो’चेजति सजिलो छ ? हामीले यी प्रसंगहरु के’लाएका छौं । दुई बर्ष अगाडिको कुरा हो । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता
ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ?
June 21, 2021 admin समाचार 3571
केही दिनको क’रेक्सन पछि सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला ४०० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महा’संघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ४०० रुपैयाँले बढेर ९० हजार ४०० रुपैयाँ पुगेको हो । गत